“Africa women’s cup 2019”: anisan’ireo firenena efatra hiady ho tompondaka i Madagasikara | NewsMada
Sambany ary voalohany eo amin’ny tantaran’ny rugby lalaovina olona 15 eto Afrika no hisy fifaninanana hiadiana ny ho tompondakan’ny kaontinanta, sokajy vehivavy. Firenena efatra ny hiady ny ho lohany amin’izany.
Araka ny tapaky ny fivoriamben’ny Rugby Afrique, farany teo, hisy ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ny sokajy “senior” vehivavy na ny “Africa women’s cup 2019”, lalaovin’olona 15. Sambany ary voalohany hisy ity fifaninanana ity. Hampiantrano ity andiany voalohany ity i Afrika Atsimo.
Araka ny tetiandro, hotanterahina atsy Afrika Atsimo, ny 9 ka hatramin’ny 17 aogositra ho avy izao, ity fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy vehivavy, ity. Amin’izao andiany voalohany izao, firenena efatra ihany ny hiady lohany: i Afrika Atsimo, mpampiantrano, i Kenya, i Madagasikara ary i Ogandà.
Tsy mbola fantatra aloha ny “formule” hanaovana ny fifaninanana na hifandona avokoa ny rehetra ka miatrika ny famaranana ny roa voalohany be isa indrindra na ho lalao manasa-dalana avy hatrany ny hatao.
Hanan-danja ity “Africa women’s cup 2019” ity satria hiadiana toerana hiatrehana ny ho tompondaka eran-tany, hatao any Nouvelle-Zélande, ny taona 2021. Tsy mbola hay ihany koa na ny ho tompondakan’i Afrika ihany no hisolo tena an’i Afrika amin’izany fiadiana ny ho tompondaka eran-tany izany na ny roa voalohany.
Hatreto, efa vonona hiatrika izany ny Makis de Madagascar, efa niatrika ny fampivondronana, efa ho herintaona latsaka izay.
Tsy mbola niatrika lalao ho an’olona 15 izany ny Makis vehivavy, raha teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, saingy mino ny teknisianina fa tsy hanavao loatra azy ireo ny ho fiatrehana izany satria mpilalao efa miatrika fifaninanana amin’ny rugby à XV ny ankamaroan’izy ireo. Raha ny tombana, i Afrika Atsimo no tena atahorana. I Kenya sy i Ogandà, mety hitovitovy amin’ny Makis de Madagascar satria ny rugby à VII ny tena mahazatra azy ireo.